Fibreglass ukulungisa window screen amabala - China Wuqiang County Huili Fibreglass
Fibreglass window screen yokulungisa ngamabala
Fibreglass window screen yokulungisa patch kwakhona ogama Fibreglass Screen yokulungisa Kit, Self Stick Screen Patch, screen ukulungisa patch, fiberglass umfanekiso isiziba.
Ngcina backed amabala fiberglass osetyenziswayo imingxunya wokulungisa iinyembezi izikrini window okanye iingcango screen. Akukho izixhobo ezifunekayo. 5 Pack Material: Fibreglass Color: Iimbonisolo zasekuqaleni Self anamathele screen yokulungisa patch Reach: 3 "Ububanzi: 3" ezisetyenziswa ukulungisa imingxunya kunye iinyembezi izikrini window okanye iingcango screen Akukho izixhobo ezifunekayo. Ngeflakisi.
Indlela yokulungisa i screen eqwengiweyo
1: Sika emngxunyeni
Sika umngxuma square ngeenxa zonke iinyembezi usebenzisa lokulinganisa kunye ebukhali into eluncedo imela. Gcina una encinanana kangangoko kwaye ushiye ubuncinane 1/2 apha. Yamandulo screen ecaleni ifreyim yesinyithi.
2: glue kwi isiziba
Sika isiziba fiberglass umfanekiso ukuba ukuthanda Umz 1/2 apha. Phezu elunxwemeni nganye. Beka iphepha njengomthwebeba phantsi kwe window wekhusi ukugcina ngcina ukusuka njengokujonga workbench. IZiko patch phezu umngxuma, sebenzisa i bead of kulu jikelele umngxuma, wawaneka iglu ngokusebenzisa isiziba kunye window screen usebenzisa intonga flat ngamaplanga.
Ukuba bakhathele nge yeengcongconi ndii ijikeleza entloko yakho belinda kwakho ubusuku bonke, njani ngokulungisa ikhusi? Amabala ziya kuba abonakale kwaye ungakhangela ixeshana tacky, ngoko ukuba iinyembezi mkhulu okanye iskrini kwindawo ebonakalayo kakhulu, endaweni yonke iskrini. Kungenjalo, ukuthatha imizuzu engama-20 kwaye ukuvala nje umngxuma.
Ukuba isikrini sakho fiberglass (kuya uzive ngathi elaphini), ukuthenga 1/2 ft. Of fiberglass ezintsha ukuhluza off umqulu evenkileni zekhompyutha okanye iziko ikhaya okanye ucele cutoffs ezimbalwa. Kwakhona sithathe nokuba kulu rubber-based okanye Super Iglu Gel. Emva koko landela Amafoto 1 no 2. Undoqo ukuze ukulungisa entle ngenkangeleko uzibambileyo lokulinganisa ngokuqinileyo ngokuchasene workbench ukuze ukwazi ukwenza indawo ofunda ecocekileyo (Ifoto 1).
Ukuba endinayo ye-aluminiyam screen kunye umngxuma omncinane, athenge ikhithi patch evenkileni zekhompyutha okanye iziko ekhaya. Iza kuba precut ezininzi 1-1 / 2-in. iindawana namagwegwe eyenziweyo ukuba yanxitywa ngqo kwikhusi.